I-KDE isazibophelele ekuphuculeni iWayland; ungalibali ngePlasma 5.24 | ubunlog
I-KDE isazimisele ukuphucula iWayland, kodwa ngaphandle kokulibala iPlasma 5.24
IPablinux | 14/05/2022 13:07 | Ukuhlaziywa ukuba 14/05/2022 13:08 | KDE, Ubuntu
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bendivavanya i-Wayland kwi-KDE. Kubonakala ngathi iphucula, kodwa oko bathi inokusetyenziswa njengendlela ephambili, ke, ndingathi kufuneka uyithathe nge-tweezers. Ewe, iyasebenza, kwaye ewe, ixesha elininzi iyazinzile, kodwa ngamanye amaxesha ikhompyuter yam ibingacimi, ndibone ibug ndagqibela ngokubuyela kuX11. KDE ifuna ukutshintshela kwiWayland kwixesha eliphakathi, kwaye yiyo loo nto sifunda rhoqo ngeveki utshintsho oluthile lwexesha elizayo lwale protocol.
La inqaku liposwe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo Akwahlukanga kulo mba. Kwakhona okumangalisayo kukuba kukho utshintsho oluninzi olulungiselelwe iPlasma 5.24.6. Ukuba nabani na ucinga ukuba akukho nqaku le-5.25 lohlaziyo lwePlasma, kwaye into elandelayo sele sele iyiPlasma 5.25, baxelele ukuba yinyani kuphela: i-5.24 sele ikwimisebenzi, kodwa i-XNUMX yi-LTS, ngoko usaza kufumana uhlaziyo. ukusuka kulondolozo kunye nenye i-backport.
1 Iimpazamo zemizuzu eyi-15 zilungisiwe
Iimpazamo zemizuzu eyi-15 zilungisiwe
Ingxelo iye yehla ukusuka kuma-70 ukuya kuma-68, ekubeni baye balungisa i-2 kwaye abafumananga naziphi na ezintsha. Bobabini beza kwiPlasma 5.24.6, kodwa bafanele ukuba beza kwi-5.25 ngaxa lithile:
Xa i-Discover window ikwimo emxinwa/ehambayo kwaye kukho into efunwayo, indawo yokukhangela ngoku iyanyamalala njengoko ilindelwe xa iwindow ilungiswa ukuba ibe banzi (Matej Starc, Plasma 5.24.6).
Imboniselo yeSixokelelwano sebar yecala ngoku ihlala ibonwa kungqamaniso xa iphepha eliboniswe liqela lenjongo engundoqo litshintshwa libe kwenye into, njengokuvula iphepha elahlukileyo ngaphakathi kwe KRunner (Nicolas Fella, Plasma 5.24.6).
U-Elisa ngoku uyakwazi ukubonisa iingoma zengoma ezifakwe kwiifayile usebenzisa ifomathi ye-LRC, kwaye ngokuzenzekelayo uskrole umbono wengoma ngelixa ingoma idlala (Han Young, Elisa 22.08).
Ngoku kukho inketho yokuba umsebenzisi alawule imo yethebhulethi. Igcina ukusilela kwayo ngoku "tshintsha ngokuzenzekelayo xa kufanelekile", efumaneka kuphela eWayland, kodwa ngoku inganyanzelwa ukuba ihlale ivaliwe, kwaye ezo zikhetho zisebenza kwi-X11 ngokunjalo. (UMarco Martin, iPlasma 5.25).
I-Monitor yeNkqubo ngoku inokhetho lokwenza iphepha liqalise ukulayisha idatha ngokukhawuleza ukuba i-app ivuliwe-endaweni yokuba ngokukhawuleza ukuba iphepha lifikeleleke- kwaye iphepha leMbali elingagqibekanga ngoku liyisebenzisa ngokungagqibekanga ( Arjen Hiemstra, Plasma 5.25).
I-Yakuake ayisayi kuvulwa ngokungafanelekanga kwikhusi esebenzayo xa imiselwe ukuba isoloko ivula kwikhusi elithile (Jonathan F., Yakuake 22.04.2).
Xa usebenzisa isixhobo sesityalo sikaGwenview esine-fixed aspect ratio, ukutshintsha amaxabiso kwiibhokisi zesayizi ngoku kusebenza ngokuchanekileyo (Alban Boissard, Gwenview 22.08).
Ukulungiswa kweendlela eziqhelekileyo apho iPlasma inokuphazamiseka xa isusa ipaneli enewijethi ye-systray (Fushan Wen, Plasma 5.24.6).
Umphumo we-Overview awusabonisi iiphaneli, ukubhidanisa ukuba ucinge ukuba ziyasebenzisana xa zingekho (Marco Martin, Plasma 5.24.6).
Iiwijethi zokujonga iSistim ngoku zilayisha ngokuchanekileyo iiseti ezenziwe ngesandla. Ukuze oku kusebenze kufuneka uphinde wenze i-presets ngesandla (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24.6).
Xa i-Discover isetelwe ukuba iqalise ngokuzenzekelayo emva kokufaka uhlaziyo, ngoku iqala kwakhona ukuba zonke izihlaziyo zisetyenziswe ngempumelelo (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24.6).
Xa uzisa i KDE isicelo phakathi kwesinye isicelo se KDE, isicelo esisebenzayo ngoku siyazivula, njengoko senza kwi X11. Oku kwenza uphehlelelo lopopayi lwengxelo lusebenze kwizicelo eziqaliswe kwiKickoff, KRunner, kunye namanye amaqhekeza esoftware ye KDE. (Aleix Pol Gonzalez, iPlasma 5.25). Ngokuphathelele kulo mba, qaphela ukuba xa usetyenziso lusebenza kwaye aluvuki njengoko kulindelekile, ukuba (okanye zombini) ye-apps yinxalenye yesithathu, kungenxa yokuba loo app ifuna ukusebenzisa i-xdg_activation_v1 Wayland protocol.
Kulungiswe i-glitch ebonakalayo enzulu efunyanwa ngabasebenzisi be-NVIDIA GPUs (Erik Kurzinger, Plasma 5.25).
Ukucofa iMeta+V ukubonisa imenyu yeziqulatho zebhodi eqhotyoshwayo ngoku ibonisa imenyu eyiyo kwindawo yekhesa yangoku, kunefestile eyahlukileyo embindini wekhusi (David Redondo, Plasma 5.25).
Iindlela ezimfutshane zehlabathi ngoku zinokuthi zisebenze ngelixa udonsa ifestile (Arjen Hiemstra, Plasma 5.25).
Xa kukho into erekhoda isikrini, i icon ebonakala kwitreyi yenkqubo ukwazisa ngale nto ngoku ivela kwindawo ebonakalayo yetreyi apho ikhoyo, endaweni yefestile evelelayo apho iyakulahleka khona kwaye isilele injongo yayo. ubomi (Aleix Pol González, Plasma 5.24.6).
I-KWin ayisayi kungqubana xa i-Alt+Tab icinezelwe ngelixa imenyu yomxholo yebar yewonga yefestile ibonakala (Xaver Hugl, Plasma 5.24.6).
I-applet ye-applet ye-Digital Clock's "Khuphela kwibhodi eqhotyoshwayo" ngoku ihlonipha ukuba ingaba i-24-iyure okanye i-12-iyure yeyure iyasetyenziswa (Felipe Kinoshita, Plasma 5.25).
Iimboniselo ze-Icon ziboniswa kwakhona kwiifayile kwi-NFS okanye kwi-NTFS drives, iNkunkuma, iiVaults zePlasma, i-KDE Qhagamshela izinyusi, kunye nezinye iindawo ezingezizo ezondawo (David Faure, Frameworks 5.94). Qaphela ukuba oku kuthetha ukuba unikezelo lwemboniselo kwakhona lunokubangela ukucotha kunye nomkhenkce kwi-Dolphin xa ufikelela kwezo ndawo ukuba ziyacotha, kwaye basebenza ngendlela engcono yokunqanda oku ngaphandle kokuvala iimboniselo zakuqala ngokupheleleyo.
Xa urhuqa kwaye ulahla umfanekiso kwidesktop kwaye ukhethe "Seta njengephepha lodonga", ngoku izakutshintshela ngokuzenzekelayo kwiplagi yephepha lodonga echanekileyo exhasa amaphephadonga womfanekiso omnye ukuba kukho into eyahlukileyo eyayisetyenziswa (Fushan Wen, Frameworks 5.95).
Xa iziqinisekiso zokuqinisekisa ezingachanekanga zibonelelwa kwi-lock okanye izikrini zokungena, yonke i-UI ngoku iyagubha kancinci (Ivan Tkachenko, Plasma 5.25).
Iithebhu zesicelo se-GTK kusetyenziswa umxholo we-Breeze GTK ngoku ihambelana nesimbo se-Qt kunye ne-KDE yesicelo sethebhu (Artem Grinev, Plasma 5.25).
Iibha zemenyu kunye neendawo ezisebenzisa umbala webha yemenyu kwiinkqubo ze-GTK kusetyenziswa umxholo weBreeze GTK ngoku sebenzisa umbala weheader njengoko kulindelekile, ukuba udweliso lombala olunemibala yeheader lusetyenziswa (Artem Grinev, Plasma 5.25).
Amaqhosha ebar yesixhobo anee icon kunye namaqhosha ebar yesixhobo ngaphandle kwe icon ngoku abelane ngesiseko sokubhaliweyo okufanayo, ngoko ke okubhaliweyo kwawo kuya kuhlala kuhambelana ngokuthe nkqo (Fushan Wen, Plasma 5.25).
Izijekulo zesikrini esichukumisayo esineminwe emininzi ngoku zilandela iminwe yakho njengephedi yokuchukumisa kunye neentshukumo zomphetho zokuswayipha. (Xaver Hughl, iPlasma 5.25).
Izenzo eziveliswayo xa umgca wesikrini uchukunyiswa ngoku ukhutshaziwe ngokungagqibekanga ngelixa kukho naziphi na iifestile ezipheleleyo zesikrini, eziphucula i-UX yemidlalo apho imiphetho yesikrini ichukumiseke kakhulu (Aleix Pol Gonzalez, plasma 5.25).
Iwijethi yesichazi-magama ngoku ibonisa umyalezo wemposiso efanelekileyo xa ingakwazi ukufumana inkcazo (Fushan Wen, Plasma 5.25).
Iwijethi yemozulu ayisabonisi idecimals kumboniso wayo wobushushu xa isetyenziswa kwiDashboard (Nate Graham, Plasma 5.25).
Kwinkqubo yoqwalaselo (SDDM) Login Screen page, i "Stop Command" kunye "Restart Umyalelo" imihlaba yokubhaliweyo ngoku iyahleleka, ngoko umyalelo unokuchwethezwa ngesandla, okanye ukongeza ingxabano yomgca womyalelo ukuba uyanqwenelwa, endaweni yokuba ukwazi ukukhetha umyalelo usebenzisa i Vula incoko yababini (Umntu onegama elinguzenzele "oioi 555, Plasma 5.25).
IPlasma 5.25 iyeza ngoJuni 14, kunye ne-Frameworks 5.94 ziya kufumaneka namhlanje. I-KDE Gear 22.04.2 izakuhlala nolungiso lwebug ngoLwesine we-9 kaJuni. I-KDE Gear 22.08 ayikabinawo umhla omiselweyo omiselweyo. IPlasma 5.24.6 iya kufika nge-5 kaJulayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE isazimisele ukuphucula iWayland, kodwa ngaphandle kokulibala iPlasma 5.24
NgeLinux 5.18-rc7 kwakhona kwipani yeoli, ukukhululwa okuzinzile kufuneka kufike kule Cawa
I-GNOME yenza utshintsho kumyalelo wayo, phakathi kwezona zinto zintsha zibalaseleyo kule veki